प्रदेश नं. २ मा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्छ
उमेश कुमार यादव, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रदेश नं. दुईमा एमाले पार्टीको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्दा पनि यहाँ माओवादी केन्द्र पार्टी मजबुत रहेको छ । निर्वाचन भइरहेको ८ ओटै जिल्लामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारदेखि लिएर कार्यकर्तामा अहिलेदेखि नै जीतको उत्साह सुरु भएको छ । जसको कारणले एमाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा उदासी छाएको छ । उनीहरुको अवस्था कमजोर भइएकोले निराशा उत्पन्न भएको छ । सप्तरी जिल्लामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने कुरामा म पुरा विश्वस्त छु । तर एमाले पार्टी चौथो, पाँचौं, छैठौं पार्टी के बन्ला भन्ने कुरा उनीहरु नै जानुन् । एमालेले मण्डले राष्ट्रबादको वकालत गर्दा मण्डले राष्ट्रबादबाट उत्पीडित मधेशी, आदीवासी र जनजाती जनताले कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण राख्न सक्छ त्यस्तै अहिले भइरहेको छ ।